Ndị ndụmọdụ, ndị ọrụ ngo na ndị ọrụ: Ebee ka anyị na-aga? | Martech Zone
Ọtụtụ mgbe, ana m anụ mkpu mgbu mgbe anyị na-agakwuru ndị ndụmọdụ na mpụga ma ọ bụ ndị ọrụ ngo ka ha rụchaa ọrụ. Ọ bụ ọnọdụ siri ike - oge ụfọdụ ndị ọrụ na-eche na a na-arara ha nye na ị na-aga mpụga. N'ikwu eziokwu, enwere usoro mmụta na mgbakwunye ego iji gaa n'èzí. Enwere uru, ọ bụ ezie.
M hụrụ n'anya nke a ihe ncheta si Nhụsianya:
Na ọchị, ndị ndụmọdụ na ndị ọrụ ngo ghọtara eziokwu ahụ na ọ bụrụ na ha arụghị ọrụ, ha agaghị alaghachi. Oge. Ọ bụ otu ohere ịkụziri ndị ahịa ntụkwasị obi iji nweta ọrụ ọzọ. Nakwa, ọ dịghị nke nsogbu ndị ọzọ metụtara ndị ọrụ - ezumike, uru, nyocha, ndụmọdụ, ụgwọ ọzụzụ, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, wdg.
Ndị ọrụ bụ itinye ego na-adịte aka. Nke a nwere ike daa ka ihe anaghị adị gị, mana ọ dị ka ịzụ ụlọ ma ọ bụ ịgbazite ụlọ. Lọ ahụ chọrọ nlebara anya dị ukwuu karị nke ga-atụ anya ịkwụ ụgwọ ogologo oge. Ma ọ na-akwụ ụgwọ n'ezie? Ọ bụrụ n ’ị tụgharịrị ebe ndị folks anaghị anọ karịa afọ ole na ole, ị na-enwetaghachi ego gị?
Ndị na-enye ndụmọdụ na ndị ọrụ ngo nwekwara nghọta nke ọrụ ndị ahịa. Are bụ onye ahịa ha ma ebumnuche ha kachasị mkpa bụ ime gị obi ụtọ. Mgbe ụfọdụ ọ bụghị ndị ọrụ. Ndị ọrụ nwere atụmanya maka ndị were ha n'ọrụ - oge ụfọdụ na-esikwu ike karịa ndị ọzọ.
Dika uru ahuike riri elu na oru ndi oru na-aga n'ihu bu nsogbu, o juru m anya na anyi anaghi eji ndi oru ngo na ndi okacha amara eme ihe kariri ime oru anyi. Nke ahụ bụ obere nwute n’ụzọ ụfọdụ, mana ọ na - ekewa ọka na igbogbo ya. Echere m na ọ na-ewe nnukwu nzukọ siri ike iji wulite ntọala nke ndị ọrụ dị oke egwu na ị gaghị achọ ka mpụga mara maka nka - ị kwụrụ ụgwọ zuru oke na ị gaghị echegbu onwe gị maka ịhapụ ha. Suchlọ ọrụ dị otú ahụ ọ dị?
O di nwute na Doug, enweghi otutu ulo oru ndi di ka, ma odika amaghi m ha. Echere m na mgbe ụfọdụ ụlọ ọrụ kwesịrị ịgwakọta ihe ntakịrị ma nweta enyemaka nke mpụga, ndị ọrụ nwere ike ịhapụ ụfọdụ nsogbu ndị ọzọ oge ụfọdụ maka ịrụ ọrụ ha dịka ịkwụ ụgwọ, mmepe ọrụ, yana Nlekọta Ahụike ịkpọ aha ole na ole. Dịka i kwuru mgbe ụfọdụ, itinye ego na ogologo oge anaghị akwụ ụgwọ.
Ihe ụlọ ọrụ na-anaghị ahụkarị bụ na ha na-enye ndị na-ahụ maka ọrụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ma na-arapara ndị ọrụ ha ugbu a n'ọrụ mmezi. Nke a megidere echiche ahụ na ndị ọrụ bụ itinye ego ogologo oge. Akụkụ nke ihe m masịrị banyere ịbụ onye ndụmọdụ bụ na enwere ezigbo ohere na ọrụ ọ bụla ga-ekpughe m nye ihe ọhụrụ.
Maka ndị na-agbazi agbawa ma ọ bụrụ na ha anaghị arụ ọrụ, nke ahụ anaghị eme n'oge na-adịghị anya. Ya mere, ha anaghị eme ihe ọ bụla ma na-akwụ ụgwọ. Nke a na-akpata iwe n'etiti ndị ọrụ.
Nke a bụ Nathania Johnson
Site na onye ọrụ, echere m na oge ụfọdụ ị ga-ele anya karịa ọnụọgụ maka ihe na-egbochi onye ọrụ.
Afọ ole na ole gara aga, arụrụ m ọrụ dị ka onye ọrụ nkwekọrịta nọọrọ onwe ya maka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Azụrụ m mkpuchi ahụike m ma enweghị m ezumike nka. Elere m ọrụ ahụ anya dị ka “ụkwụ m n’ọnụ ụzọ” nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ rụghị otu ahụ. Ma anaghị m akwa ụta. N’eziokwu, ịrụrụ m ọrụ n’ebe ahụ masịrị m. Onye isi m tụkwasịrị m obi, eleghị anya n ’ubu m. N'iwu ya enweghị ike ikpebi oge awa m rụrụ (ọzọkwa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ị na-arụ ọrụ 24/7).
Ugbu a, m na-arụ ọrụ dị ka onye ọrụ maka ụlọ ọrụ SEM. M jụrụ inshọransị ahụike b / c di m ka mma yana ụlọ ọrụ bido ịmalite yabụ enwere nnukwu uru ọ bụla. Gwọ ọnwa m erughị 5k karịa ihe m mere n’afọ ole na ole gara aga. Ma ị maara ihe? Ahụrụ m ọrụ ahụ n'anya. Ndị ọrụ ibe m dị mma ma enwere obere ihe nkiri. Anyị nwere oge ịgbagha nke bụ ihe dị egwu b / c na-azụ ụmụaka bụ ndị nzuzu na ụlọ akwụkwọ na ihe niile.
Agaghị m agọnahụ na ego dị mma. Mana echiche ịlaghachi na mpaghara ọrụ ọdịnala - nke ọma, enweghị m ike ịghọta ya-maka ego ọ bụla. B / c Obi dị m ụtọ. You nweghi ike ide nke ahụ n’ime ego akwụ ụgwọ.
Foto ndị dị na Hawaii
Fọdụ ndị na-eche na ọ bụrụ na ọ na-ewe otu nwanyị ọnwa 9 iji mụọ nwa, ha nwere ike iku ndị ọzọ ụmụ nwanyị 8 na-enye ndụmọdụ wee nwetakwa nwa ahụ n'otu ọnwa.
Oge ụfọdụ, ọ naghị arụ ọrụ nke ọma dịka atụrụ anya.
Dịka onye ndụmọdụ, echere m na ọ dị mma. Ee, ọ kwụsighi ike, mana ọ na - enyekwu nnwere onwe, ma achọrọ m ịhọrọ onye isi m. Ekwesịrị m ịre uru nke m (nke ahụ adịghị njọ - m nọ na Canada mana m ghọtara na ọ dị ọnụ karịa n'ebe ndị ọzọ).
Echekwara m na ọ dabere na ọrụ. Abụ m onye na-enye ndụmọdụ na ebe nrụọrụ weebụ. Imirikiti ndị mmadụ chọrọ ịmegharị ọ bụla afọ ole na ole wee nweta jr. ihe iji lekọta. Ya mere, ọ na-arụ ọrụ. Ọrụ ndị ọzọ chọrọ oge niile. Ana m eche maka onye ndụmọdụ ego m - agaghị achọ ka ọ bụrụ onye ọrụ nkwekọrịta ma ọ bụ ọnụ ụzọ na-agbanwe agbanwe nke ụmụ okorobịa dị iche iche. Ọrụ ụfọdụ chọrọ nkwụsi ike ahụ.
Ekwenyere m na izugbe na n'ọtụtụ ọnọdụ, onye ndụmọdụ ga-akawanye ike ma nye ndị ahịa ọrụ karịa ndị ọrụ ime. Ndị ọrụ na-eme obere ọrụ na-esikarị n'ụzọ ahụ n'ihi na ha anaghị arụ ọrụ ha hụrụ n'anya ma bụrụ ndị kacha mma, anaghị akwụghachi ha ụgwọ ma ọ bụrụ na ha emee ma ọ bụ anaghị ata ha ahụhụ ma ọ bụrụ na ha emeghị nke ọma. (Chọpụta, enwere ọtụtụ ihe kpatara ya, mana m na-ekwu okwu ebe a).
Mana enwere ike itinye mmekọrịta ndị metụtara nsogbu ahụ. Echere m na uru bụ na ndabara, ị iku onye ndụmọdụ ime a kpọmkwem ihe na presumably ọ / ọ bụ oké na na hụrụ n'anya ime ya. Ma na e nwere ihe a ụgwọ ọrụ / ugwo maka ọrụ mere… e nweghị ụzọ ị na-aga n'ọdụ ụgbọ mmiri na-arụ na-akwụ ụgwọ maka ngwaahịa na Ẹnam ekese mbubreyo. Na ọrụ n'ozuzu mara na ha nwere ọrụ n'agbanyeghị ihe… ma ọ bụrụ na ngwaahịa ụgbọ mmiri na oge ha nwere ike na-atụ anya a 4% bulie, ebe ndụmọdụ na-atụ anya ka ndị ọzọ na-arụ ọrụ ala n'okporo ụzọ ma ọ bụ a mma mmezi nkwekọrịta.
Enwere otutu ndi ndu ojoo n’ebe ahu, obi m bu na o siri ike ichota onye okacha amara dika ichota onye oru. Echere m na ọ bụrụ na ịchọta onye ukwu n'ime, ị ga-eso ya. Ọ bụrụ n’ịnọgide na nke ọjọọ otu n’ime ha, ịga n’ihu.
Akwa post Doug… a otutu na-eche banyere, na ihe na uche m nke ukwuu ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ndị ahịa m nọ na ọnọdụ ebe ha na-agbalị chepụta ma ọ bụrụ na ha iku m dị ka onye ndụmọdụ ma ọ bụ iku onye ọzọ dị ka onye ọrụ.
Onye nnyemaaka Virtual
Na-akpali mmasị post. Dị ka a Virtual nnyemaaka, M ọzọ ngo na dị nnọọ a tuo nke ndụmọdụ. Otu ihe na-ewute anyị bụ uche nke ndị were mmadụ n'ọrụ chọrọ ndị ọrụ, mana chọrọ ịkwụ ha ụgwọ dị ka onye ọrụ ngo iji zere ụtụ isi. Ndo, mana inwetaghi achicha gi ma rie ya. Dịka onye nwe azụmaahịa, abughi m onye ọrụ. Ọ bụrụ na onye ahịa chọrọ ka m mee ka otu (ịnakwere iwu dara ada, nọrọ ebe ahụ ma kpọọ ha, akwụe ego akwụ ụgwọ), yabụ na ha ga-akwụ m ụgwọ dịka onye ọrụ, nke pụtara na ọ ga-aba uru m mgbe, maara oge, akwụ ụgwọ, uru-mara ma na-akwụ ụgwọ-ego (ee, ndị ọrụ na-akwụ ụgwọ akụrụngwa ha ma kwụọghachi mmefu ha). Ọ bụrụ na ha achọghị ime nke ahụ, mgbe ahụ, ha kwesịrị ịmalite ịnakwere eziokwu ahụ bụ na ndị ọrụ ngo abụghị ụzọ iji zere ịgbaso iwu, yana na a ga-enwerịrị azụmaahịa dịka eziokwu ahụ dịka ndị nwere azụmaahịa, Ndị ọrụ ngo ga-akwụ ụgwọ ọnụego ndị ọkachamara na-egosipụta nka ha, ihe ọmụma na uru ha, nke ahụ ga-akwagide azụmaahịa ha baa uru.